Ndụmọdụ: Nnyocha na nyochaa ihe ọghọm nke ịda | Ngwọta OMG
Atụmatụ: Nyocha na nyocha ihe ize ndụ nke ịda
Nyocha na nyocha ihe ize ndụ nke ịda
Ekwesịrị ikpuchi ndị agadi gbara afọ 65 ma ọ bụ karịa maka nsogbu ịda ada otu ugboro n'afọ. Enwere ike ịlele ihe egwu nke ọdịda ngwa ngwa site na ịlele maka akụkọ ọdịda na afọ gara aga na ịme ule oge & ịga (TUG). Nnukwu ihe ize ndụ dị adị ma ọ bụrụ na akụkọ ọdịda ọdịda dị mma na TUG dị mma (emechara karịa 14 sekọnd); ihe ize ndụ dị mma ma ọ bụrụ na ọdịda ọdịda dị mma ma ọ bụ TUG dị mma; ihe ize ndụ dị ala ma ọ bụ na-anọghị ma ọ bụrụ na ọdịda ọdịda adịghị mma na TUG adịghị mma (emechara na erughị 14 sekọnd). Maka ndị nwere nnukwu nsogbu ịda, nyocha zuru oke na-atụ aro ka ịchọpụta ihe ụfọdụ dị egwu. Ntụle a ga-abụrịrị ọtụtụ ọrụ na ọtụtụ ọrụ. Ọ ga-agụnye nyocha nke ụlọ onye ahụ metụtara. Maka ndị nwere oke ọghọm ma ọ bụ dị ala (ma ọ bụ mba) nke ọdịda, a na-atụ aro nyocha pere mpe nke opekata mpe ihe ndị a
: - ọgwụ
: - ihe ize ndụ dị n'ụlọ
: - ọrịa na-adịghị ala ala ma ọ bụ nnukwu ọrịa
Ikike nke ndị na-elekọta ndị na-elekọta mmadụ na-ahụ maka ihe ize ndụ nke ịdaba na ndị agadi na ịchọpụta ihe ize ndụ ha nwere ike ịgbanwe site na iji ngwa ngwa nyocha na ozi ndị ọzọ bụ ihe bụ isi nke mgbochi ọdịda. Usoro a kwesịrị ikwe ka ha rụọ ọrụ mmegharị ma si otú ahụ mee ka ihe ntụgharị dị na ya daba na mbelata.
Iji mekwuo ka ha dị irè, a na-atụ aro ka ịnye usoro mgbochi ọdịda maka ndị agadi ahụ bụ ndị kachasị njọ. Ndi mmadu a ga - erite uru site na mmekorita ndi ozo di mma na ndi ozo di nma (American Geriatrics Society et al., 2001; National Aging Research Institute, 2004; Gillespie, Gillespie, Robertson et al., 2003). Iji chọpụta ndị agadi nọ n'ihe ize ndụ, kọmitii na-ahụ maka ndụmọdụ na-atụ aro usoro nyocha abụọ.
Usoro nyocha dum na-ewe ihe karịrị 10 nkeji oge, ma ọ bụ onye nlekọta ahụike ma ọ bụ ndị na-elekọta ndị na-elekọta mmadụ nwere ike ịma banyere nsogbu nke ndị agadi. Ihe nyocha nyocha na ihe nyocha a kọwara n'isiokwu a bụ nkọwa zuru oke na ngalaba "Maka iji ya eme ihe".
Nzọụkwụ mbụ iji nyochaa bụ iji ngwa ngwa chọpụta nhazi. E mepụtara ọtụtụ ule iji lelee ndị agadi maka ihe ize ndụ nke ịda ada site na ịnwale ikike ọrụ ike, nke bụ otu n'ime ihe ndị dị ize ndụ maka ọdịda (Franchignoni, Tesio et al., 1998; Whitney, Poole et al., 1998; Chiu, Au-Yeung et al., 2003; Lin, Hwang et al., 2004). Ule a nwere ọdịdị dị iche na njirimara. Dịka ọmụmaatụ, a na-eme ụfọdụ ka ha buru amụma "ndị na-ada ada" n'ọdịnihu (ezi uche nke ọma), ndị ọzọ ga-eme n'ọdịnihu "ndị na-abụghị ndị na-adaba" (ezigbo nkọwa *); ụfọdụ na-anwale ọtụtụ akụkụ na nguzozi akụkụ, ndị ọzọ bụ otu akụkụ; ụfọdụ na-achọ ụfọdụ ọzụzụ iji kọwaa nsonaazụ ha, ndị ọzọ dị mfe iji ma kọwaa.
N'ebe a, ịdị mfe na ngwa ngwa enweela ihe ùgwù iji kwado nchikota nke nyocha ihe ọghọm ọdịda na omume ọkachamara kwa ụbọchị. Ule a choro ebe a, ule nke oge & aga (TUG), di mfe iji ma nye obi uto uche * na nkọwapụta *. Ọzọkwa, a kwadoro ya na ndị agadi bi n'ụlọ (Podsiadlo na Richardson, 1991; Shumway-Cook, Brauer et al., 2000; Bischoff, Stahelin et al., 2003). Gwa onye ọrịa ahụ ka o si n'oche ya bilie na-enweghị iji enyemaka na-abụghị omenala, jee ije 3 mita, tụgharịa wee laghachi n'ọnọdụ ịnọ n'oche ahụ. Oge mmega ahụ jiri aka elekere abụọ (ma ọ bụ elekere elekere) wee mee ihe mmega ahụ. 10. Ndị okenye bi n'ụlọ na-anaghị enwe nguzozi ma ọ bụ ndị na-agaghị aga ije ga-enwerịrị ike mezue mmega ahụ na ihe na-erughị sekọnd 14. Oge karịrị 14 sekọnd na-egosi obere mbugharị na ihe egwu nke ịda.
Onye na - adabarịrị na - enye nsogbu dị ukwuu karịa ịdaba ọzọ na onye na - enweghị ihe ọ bụla na - adaba na ịda (Campbell, Borrie et al., 1989; Nevitt, Cumming et al., 1989; Luukinen, Koski et al., 1996 ; Friedman, Munoz et al., 2002). Otú ọ dị, ndị agadi agaghị ekweta na ha ga-adakwasị ndị dị ha nso ma ọ bụ ndị dọkịta na-agwọ ha (O'Loughlin, 1991). Nzọụkwụ abụọ nke nyocha ahụ bụ nke na-ajụ onye ọrịa ahụ na akụkọ ntolite nke afọ gara aga (American Geriatrics Society et al., 2001). "Ị daa n'afọ ikpeazụ? Ugboro ole? "Ajụjụ ndị a nwere ike ijikọta ya na nyocha nke ọnọdụ nke ọdịda (ọnọdụ, ọrụ na iji ọgwụ mee ihe mgbe ọnyá mere, ihe ọ rụpụtara). Ajụjụ a ga-enyekwu omimi ka nyocha.
E nwere akụkọ ihe mere eme nke otu ma ọ bụ karịa dara na afọ gara aga na nkwụsịtụ ma chọpụta adịghị mma (TUG dị elu karịa 14 sekọnd). Onye ahụ nwere nnukwu ihe ize ndụ nke ịdaghachi ọzọ ma chọọ nlezianya zuru ezu yana ndụmọdụ na omume ndị e mepụtara maka ihe ndị achọpụtapụtara (usoro nke multifactorial ahaziri iche). Nyocha zuru ezu dị n'okpuru ebe a.
Onye: - dabara otu ugboro ma ọ bụ karịa n'oge afọ gara aga kama ọ naghị enwe nguzozi na nsogbu efu (TUG dị ala na 14 sekọnd); - adịghị ada n'oge afọ gara aga kama ọ na-enwe nguzozi ma nwee nsogbu (TUG dị elu karịa 14 sekọnd). Onye a na-enye ihe ize ndụ dị njọ nke ịda ma ọ bụ daa ọzọ. A na-atụle nyocha dị ntakịrị nke ụfọdụ ihe ize ndụ na-atụle yana ihe ọ bụla achọpụtara ihe ize ndụ kwesịrị ịkwado site na mmemme ụfọdụ. A pụkwara ilebara ndị nwere nsogbu dị ize ndụ anya na usoro mmepe nke ọtụtụ nde.
Enweghị akụkọ ihe mere eme nke afọ gara aga na nkwụsịtụ ma enweghi ike ịchọpụta (TUG dị ala karịa 14 sekọnd). Onye a na - enye nsogbu dị ala (ma ọ bụ) nke ịda. A na-atụle nyocha dị ntakịrị nke ụfọdụ ihe ize ndụ na-atụle yana ihe ọ bụla achọpụtara ihe ize ndụ kwesịrị ịkwado site na mmemme ụfọdụ. Enwere ike ịdakwasị ndị mmadụ dị ize ndụ maka nkwalite ahụike na nchekwa nchekwa, ma ọ bụ maka mmemme mgbochi bụ isi (lee "Nkọwa Key", p. 22) maka ọdịda ihe ize ndụ.
Nzuzo 13280 5 Echiche Taa